I Kumalula Electric Skateboard emhlabathini - Jomo Technology Co., Ltd
Sacabanga nangabafowethu-cishe ingxenye eyodwa yezindlela ezingcono kakhulu ukugcina ukungezwani esebenzayo idrayivu chain. Akubona bonke hoverboard kodwa kuphela lezi hoverboards Electric iyiphi izitifiketi ezifanele avikelekile ukusebenzisa - lokhu kufaka zonke eliphakeme 10 hoverboards engcono ezibalwe ngezansi. Basuke kunjalo isakhiwa. Uma behileleka mayelana ukuqina wena ungase abawashova ibhayisikili futhi silusebenzise usizo ongaphakeme imodi. Kukhona Harleys mini, izithuthuthu amaphoyisa, futhi Cruisers. Sazizwa lapho kwakumelwe ube nendlela engcono yokusingatha hambo dlala. Ngemva kwalokho, mhlawumbe, ukube ukufunda kangcono ngalokho empeleni okubalulekile. Kungakhathaliseki ukuthi umane oluya ngasolwandle isivivinyo Surf, ikhanda out off-road ukungcola, noma siqhubeke ne kwimboni azinzima kangako lokubhulela Isivinini isitayela emhlabeni komakhelwane, kukhona Koowheel Electric Skateboard ifaniswe ngokuphelele kuwe, kanye nesitayela sakho. Imiqondo eminingi Futuristic avele iyimbudane kakhulu yiba nengqondo, kodwa empeleni lokhu skateboard kagesi isebenza futhi, ekugcineni kwahlaluka ukuthi kokubili kumnandi futhi ewusizo.
Kube kuhle kakhulu, ngempumelelo akhiwe futhi kujabulise ukuzwa cool kakhulu, kahle eyakhiwe futhi kumnandi ukuzwa! Ungakwazi ukugibela yona ikhona ngalinye edolobheni lakho. Wena okungenzeka drift esebenzisa emakhoneni kalula isikhangiso ungase kuphela edingekayo ukuncika phambili noma emuva ukuze ukwazi ukuya phambili noma ukubuyisela emuva. Kukhona izici eziningana njengoba zibhonge:
1. ephelele iDemo uhambo ithuluzi nge playability okusezingeni eliphezulu.
2. Alisindi, ephathekayo, elula.
3. eshibhile kodwa isikhathi eside.
I Powerboard Self Ukulinganisela Scooter kuyinto wonke umuntu. Empeleni impela kancane ehluke ngokuphelele endinganisweni 'hoverboard' self sekulinganisa Scooters siyakucela esetshenziswa! Ukubuka professionalrider awuthunqise isondo langemuva, kungcono ekhandlayo ukucabanga ukuthi yena eku a scooter.
Kubalulekile ukuthatha ukugcina ka Isivinini ophelele, ukuphila kwebhetri, ekubhekaneni, amabhuleki, isiqongo, isitoreji izidingo, futhi iziqinisekiso. Ayikho izitobhi okungazelelwe engase uke hurtling eyingozi phambili. Lapho ucabanga isikuta kagesi, skateboard cishe hhayi yokuqala kwirekhodi. Lena enye amabili isondo kagesi self isikuta olinganiselayo .Wena ongema ngisho namanje kuso ngisho flip 360 degree endaweni. Amasondo amabili izinjini ezimbili ziwusizo Isivinini nokuzinza. Lena ukucabangela kubalulekile ukwenza, uma ungumuntu ikhuluphele noma ikhuluphele ngokweqile ethile.